DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray Shirka dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray Shirka dib-u-heshiisiinta beelaha Galmudug
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweynaha JF Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo xiray Shirka Dib-u-heshiisiinta Galmudug ayaa ku dhawaaqay in loo gudbay wajigii labaad ee qorshaha dhammaystirka dhismaha maamul mideysan oo hana qaada, kana tarjuma hiigsiga iyo himilada bulshada Deegaannada Galmudug.
Farmaajo ayaa bogaadiyay dadaalka mideysan ee heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ee horseeday qabanqaabada iyo qabsoomidda Shirweynahan, isaga oo ku ammaanay bulshada, waxgaradka iyo haldoorka deegaannada Galmudug biseylka ay muujiyeen iyo in ay wadajir ugu istaageen ka mira-dhalinta fursaddan taariikhiga ah.
”Dib-u-heshiisiinta aan bilihii la soo dhaafay ku hawllanayn caawa ayaynu wada aragnaa mira-dhalkeeda. Geeddi-socodka dib-u-heshiisiinta oo ina gaarsiinaya in aan u gudubno wajiga labaad ee soo xulista iyo dhisidda maamul sal adag leh oo Galmudug ay yeelato.” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Farmaajo oo soo xiray
shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug